ओपन ब्याक निर्माण र कारखानासँग सर्वश्रेष्ठ स्ट्रेच टेबल कभरहरू जेसन झण्डा कला र शिल्प
स्पानडेक्स टेबल कभर: स्लिम र एलिगन्ट हुन
हाम्रो ट्रेड शो तालिका कभरको साथ लगाएको, तपाईंको मूल सादा र साधारण तालिका एकदम भिन्न र पातलो देखिनेछ। यो अद्भुत पोशाकले तालिकाको आकारलाई जोड दिन्छ, सुन्दर घुमाउरो सम्पूर्ण सेटमा लालित्यको भावना थप गर्दछ। यो टेबुल मात्र होईन तर बढुवाका लागि उत्कृष्ट उपकरण हो, जसले पेशेवर र सफा दृश्य प्रस्तुतीकरण प्रदान गर्दछ। तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरू निश्चित रूपमा यो विशेष प्रदर्शन तरीकाले आकर्षित हुनेछ।
विकल्पहरूको लागि लोचदार पॉलिएस्टर चयन गरियो
फेब्रिकको स्ट्रेच फीचर भनेको स्नुग फिटको लागि गोप्य कुरा हो। हामी तपाईंको चयनको लागि प्रकारका कपडाहरू, १ e० ग्राम लोचदार पॉलिएस्टर, लौ retardant इलास्टिक पॉलिएस्टर र लौ retardant २0०g पॉलिएस्टर प्रस्ताव गर्दछौं।
१g० ग्राम लोचदार पॉलिएस्टर
लौ- retardant 180g लोचदार पॉलिएस्टर
लौ- retardant 240g लोचदार पॉलिएस्टर
बजेट अनुकूल र उच्च गुणवत्तामा "हो" भन्नुहोस्
कच्चा माल, जस्तै कपडा, स्याही र मुद्रण विधिहरू, तैयार उत्पादनहरूमा, हाम्रो प्रत्येक प्रक्रिया वातावरणीय मैत्री आवश्यकताको अनुपालनमा सञ्चालन हुन्छ। त्यसोभए तपाईं घटनाको प्रदर्शनको लागि यो स्ट्रेच टेबल कभर प्रयोगको लागि सुरक्षासँग आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ। साथै, हामी पूर्ण र color्ग प्रिन्टिंग र पूरा लोगो प्लेसमेन्टको लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क लिदैनौं। त्यसकारण, जब तपाइँ अनुकूलित मुद्रित स्पानडेक्स टेबल कभरको साथ खुला ब्याकको साथ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, तपाइँ सीमित बजेटमा तपाइँको सन्देश पूर्ण रूपमा उजागर गर्न सक्नुहुनेछ।
अनुकूलन मात्र ग्राफिक्समा मात्र नभई आकारहरूमा पनि
तपाईंको लागि अनुकूलित छविहरू मुद्रणको अतिरिक्त, हामी विशेष आकारको प्रदर्शन तालिकाको लागि मिल्दो मुद्रण पनि गर्न सक्दछौं। तल मानक प्रदर्शन तालिकाहरू र टेबलक्लोथहरूको लागि आकार विशिष्टताहरू छन्। यदि तपाईं यस फारममा आकारहरू मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त एक फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, हामीलाई केवल एक छवि र हाम्रो अनुभवी उत्पाद विज्ञहरू तपाईंको सहयोगका साथ छोड्नुहोस्।
(१g० ग्राम लोचदार पाली)
（२0०g लोचदार पोली）
4FT ("48" Lx30 "Wx29" H)
4FT ("48" Lx24 "Wx29" H)
.4 76..4 "x91.1"
6FT ("२ "Lx30" Wx29 "H)
8FT ("" "Lx30" Wx29 "H)
प्रश्न: तपाइँ प्रिन्टिंग लोगोमा कति रंगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हामी मुद्रण को लागी CMYK प्रयोग गर्छौं, ताकि तपाईं आफ्नो मनलाई जति रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Q: तपाईं मेरो लागि अनुकूलित टेबल कभर वा फिट टेबल कभर बनाउन सक्नुहुन्छ?
A: हो, मानक टेबल कभर आकार6′ र ′ our हाम्रो स्टोरमा छन्, तर टेबल कभर वा फिट टेबल कभरको साइज पनि तपाइँको तालिका आकार वा टेम्प्लेट आकारको आधारमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंलाई अनुकूलित आकारहरू आवश्यक छ भने, कृपया ग्राहक सेवाका लागि हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Q: के फॅब्रिक लौ retardant छ?
एक: हो, हामी चयन को लागी अनुकूलन लौ retardant कपडा छ।
Q: म मेरो टेबल कभर धोउन वा इस्त्री गर्न सक्छु?
A: हो, तपाईं आफ्नो टेबलक्लोथलाई हात धुने र इस्त्री गरेर सफा गर्न सक्नुहुनेछ।
Q: के कपडा फिक्का हुनेछ? यो कति लामो हुन्छ?
A: फिडिंग रोक्न र रंग स्थिरता कायम गर्न, हामी द्रुत र ensure सुनिश्चित गर्न उच्च बनानेका प्रिन्ट प्रयोग गर्दछौं।
Q: तन्का तालिका कभर फैलाउँदा कसरी रमाइलोबाट बच्न?
उत्तर: ब्लस गर्ने प्राथमिक कारण पातलो कपडा हो। हामी समस्याबाट बच्नको लागि गाढा १ 180० ग्राम र २0०g कपडा प्रयोग गर्ने छौं।
कस्टम स्ट्रेच टेबल कभरहरू
स्ट्रेच तालिका लोगोको साथ कभर गर्दछ